Outsource Search Engine Ukuthuthukisa. Kuthiwani konke?
Ukukhipha imali akuyona enye imibono. Kuye kwaba khona isikhathi eside, futhi sikhuluma ngokuvumelana ne-Western frugality. Ukukhishwa kwemali kwaqala kanjani?
Amazinga okukhokhwa yizindleko ezinkulu kunoma iyiphi inhlangano. Njengoba i-USA iqala ukubhekana nentuthuko yezezimali, okulindelwe ukunethezeka kwansuku zonke kwaqala ukuthuthukisa ngokushesha. Namuhla, cishe yonke imboni ephumelelayo isebenzisa abasebenzi abangaphandle. Ukusebenza kwewebhu kuyafana ngendlela efanayo njengoba kulandela isu elifanayo.
3 Izizathu ze-Outsource Search Engine Optimization
Ngaphambi kokukhetha ukukhipha amandla okusebenza kwe-injini yakho, kubalulekile ukukala ubuningi nobuhle.
Ukukhishwa kweWebhu kancane kuhluke ekukhishwe kwendabuko. Ngenxa yokuthi iwebhu iyisistimu yomhlaba wonke, ungakwazi ngaphandle komzamo omkhulu ukuthola ulwazi oludingekayo kumbuzo wemizuzwana. Uma ukhetha ukukhishwa kwe-intsource search engine, amathuba okungahambisani kokunciphisa kakhulu anciphisa.
Lapha, izindleko zokuphatha zibonisa uhlobo lomsebenzi. Izinhlangano ezivela ezizweni ezisathuthuka ziyoba namandla okukunika isaphulelo ngenxa yokungafani nokulindela ukunethezeka kwansuku zonke.
Njengoba ngichazile, okukhethwa kukho ukusebenzisa ukuphathwa kwezinga eliphezulu kakhulu. Noma kunjalo, ingxenye enkulu yabantu abanayo ayinayo imali eningi yokusetha indawo. Ngenxa yokuntuleka kwezimali, bavame ukuqhuba injini yokusesha engozini yabo siqu.
Imibono emikhulu Thatha isikhathi esiningi
Ngokungafani namanye amasu akhethekile, kuyinkqubo echitha isikhathi. Inhlangano ngayinye yewebhu kufanele ibe nehhovisi elihlukile, elizophatha kuphela lolu hlobo lokukhangisa. Ukuqaliswa kokususa amasevisi we-SEO kuthatha isikhathi, kodwa kuwufanele.
Abantu abaningi bakhetha ukuqala ukuthuthukiswa kwe-web design website ngaphakathi kokubheka ukuthi kuyilungiselelo elihle lokudala isikhathi eside. Kunoma yikuphi, inkokhelo yemali ihlala.
Ingabe kukhona ukungahleleki kokuqhathaniswa kwe-SEO?
Njengoba bethi, akukho i-rose engenawo ameva awo. Ukuhlukumezeka ngokuphathelene nenhlangano yiyona kuphela inselele ongayibhekana nayo uma usebenzisa i-SEO yakho. Mhlawumbe, sekuyisikhathi sokukhipha amandla ekusebentiseni kwakho injini yokusesha Source .